Nokia phone ​တွေ​အ​တွက် ​မ​ရှိ​မ​ဖြစ်​လို​အပ်​တဲ့ Nokia pc suite ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Nokia phone ​တွေ​အ​တွက် ​မ​ရှိ​မ​ဖြစ်​လို​အပ်​တဲ့ Nokia pc suite
​ကျွန်​တော်​တို့ ​ဖုန်း​နဲ့ ​အင်​တာ​နက်​ချိတ်​မယ် ​ဆို​ရင်​တော့ Nokia pc suite ​က ​မ​ရှိ​မ​ဖြစ်​ကို ​လို​ပါ​တယ် . bluetooth ​နဲ့ ​သုံး​ရင်​တော့ ​ဒီ​ကောင်​လေး ​မ​လို​ပါ​ဘူး . ​ဒါ​ပေ​မယ့် usb cabel ​နဲ့ ​သုံး​မယ်​ဆို​ရင်​တော့ ​လို​အပ်​လာ​ပါ​ပြီ . Direct ​ချိတ်​ဖို့​အ​တွက် PC ​က ​ကို​သုံး​တဲ့ nokia ​ကို ​သိ​ဖို့​အ​တွက်​ပါ . ​အောက်​မှာ ​ဒေါင်း​လိုက်​ပါ . direct link ​နဲ့​တင်​ပေး​ထား​ပါ​တယ် . (၂)​နေ​ရာ​က​ပါ . ​တစ်​ခု​မ​ရ​ရင် ​တစ်​ခု​နဲ့​ဒေါင်း​ပါ .